ZBO အောက်ဆီဂျင်မီးစက် - တရုတ်ဟန်ကျိုး Poly Air ကိုခှဲနပစ္စည်း
ဟန်ကျိုး Poly Air ကိုခှဲပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်ကထုတ်လုပ်အဆိုပါဖိအားလွှဲထိစိမ့်အောက်စီဂျင်ချမှတ်ခြင်းစက် PSA ဖိအားလွှဲထိစိမ့်အောက်စီဂျင်မီးစက်၏နိယာမအလုပ်လုပ်ကိုင်, Ltd မှစုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောအဖြစ် zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါယူမှအောက်စီဂျင်စုပ်ယူဖြန့်ချိဖို့ဖိအားပေးထားတဲ့ထိစိမ့်နှင့်အ depressurization desorption ၏နိယာမကိုအသုံးပြုသည် လေထု, အောက်ဆီဂျင်၏အလိုအလျှောက်ကိရိယာများကိုခွဲခြားရန်သကဲ့သို့။ Zeolite မျက်နှာပြင်နှင့်အတွင်းပိုင်းအပေါ် micropores နှင့်အတူစုပ်နေတဲ့အလင်းဆုံမှုန်ဖြစ်ပါတယ် ...
ဟန်ကျိုး Poly Air ကိုခှဲပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်ကထုတ်လုပ်ဖိအားလွှဲထိစိမ့်အောက်စီဂျင်ချမှတ်ခြင်းစက်, Ltd မှအလိုအလျောက်ခွဲခြားရန်သကဲ့သို့, လေထဲကအောက်စီဂျင်ကိုစုပ်ယူခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိဖို့ဖိအားထိစိမ့်နှင့်အ depressurization desorption ၏နိယာမကိုအသုံးပြုသည်, စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောအဖြစ် zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါယူ အောက်စီဂျင်၏ပစ္စည်းကိရိယာများ။ Zeolite အဖြူသောမျက်နှာပြင်များနှင့်အတွင်းပိုင်းအပေါ် micropores နှင့်အတူစုပ်နေတဲ့အလင်းဆုံမှုန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏အပေါက်ဝိသေသလက္ခဏာများအောက်စီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်၏ kinetic ခွဲခြာအောင်မြင်ရန်က enable ။ zeolites ခြင်းဖြင့်အောက်ဆီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်၏ခွဲခြာနှစ်ခုဓာတ်ငွေ့၏ kinetic ချင်းအတွက်သေးငယ်တဲ့ခြားနားချက်အပေါ်အခြေခံသည်။ အောက်စီဂျင်မော်လီကျူးတစ်ခုနှေးကွေးပျံ့နှံ့မှုနှုန်းရှိနေချိန်မှာနိုက်ထရိုဂျင်မော်လီကျူး, zeolites ၏ micropores အတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပျံ့နှံ့မှုနှုန်းရှိသည်။ compressed လေထဲတွင်ရေနှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၏ပျံ့နှံ့နိုက်ထရိုဂျင်၏ထံမှအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ဘူး။ အဘယ်ကိုသင်ထိစိမ့်ကော်လံကနေအတူတက်အဆုံးသတ်အောက်စီဂျင်မော်လီကျူးများဖြစ်ပါတယ်။ ဖိအားလွှဲထိစိမ့်နှင့်အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှု zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါများရွေးချယ်ထိစိမ့်ဝိသေသ၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ပြီးလျှင်, ချုံ့လေကြောင်းအရှင်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ထုတ်လုပ်, လေခွဲခြာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့တခြားထိစိမ့်မျှော်စင်ထဲသို့ဝင်နိုင်အောင်, ဖိအားထိစိမ့်, decompress နှင့် desorption ၏သံသရာစက်ဝန်းကိုသုံးပါ စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအောက်စီဂျင်။ PSA အောက်စီဂျင်ချမှတ်ခြင်းစက်ဖိအားပြောင်းလဲမှုကိုထိစိမ့်ရဲ့နိယာမအရသိရသည်အချို့ဖိအားအောက်မှာလေထဲကအောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောအဖြစ်အရည်အသွေးမြင့် zeolite ချမှတ်။ အဆိုပါချုံ့လေထုကိုစင်ကြယ်စေခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်, ထိစိမ့်ဖိအားထိစိမ့်, decompress နှင့် desorption များအတွက်ကိုစုပ်ယူထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကြောင့်လေခွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုငှါ, zeolite micropores အတွက်နိုက်ထရိုဂျင်၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းအောက်ဆီဂျင်ထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ဦးစား zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါကစုပ်ယူသည်။ အောက်စီဂျင်ချောအောက်စီဂျင်ဖွဲ့စည်းရန်ဓာတ်ငွေ့အဆင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်။ လေထုဖိအား decompress ပြီးနောက်စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သော desorption နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အခြားအညစ်အကြေးသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအောင်မြင်ရန်စုပ်ယူနိုင်ပါသည်။ နှစ်ခုထိစိမ့်တာဝါတိုင်စနစ်ထူထောင်ကြသည်ယေဘုယျအားဖြင့်, တဦးတည်းရဲတိုက်ကိုအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုစုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောရန်အသုံးပြုသည်နှင့်အခြားမျှော်စင် desorbed နှင့် regenerated ဖြစ်ပါတယ်။ pneumatic အဆို့ရှင်၏အဖွင့်နှင့်အပိတ်ပွဲအရည်အသွေးမြင့်အောက်စီဂျင်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်နားလည်သဘောပေါက်အခွားနှစ်ခုတာဝါတိုင်သံသရာက PLC Program ကို Controller, ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ compressed လေထုသန့်စင် module, လေသိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့, အောက်ဆီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြာကိရိယာအောက်စီဂျင်ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့: အဆိုပါစနစ်တစ်ခုလုံးကိုအောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။
PSA ဖိအားလွှဲထိစိမ့်အောက်စီဂျင်မီးစက်၏ 2. နည်းပညာဝိသေသလက္ခဏာများ
1. Compressed လေကြောင်းမော်လီကျူးဆန်ခါ၏ရေရှည်ဝန်ဆောင်မှုဘဝမှအထောက်အကူဖြစ်သည့်လေထုသန့်စင်ခြောက်သွေ့ကုသမှုရှင်းလင်းနိုင်သည့်ကိရိယာနှင့်ခြောက်သွေ့သောလေထု, တပ်ဆင်ထားသည်
2. အသစ် pneumatic ရပ်တန့်အဆို့ရှင်ဖိအားလွှဲထိစိမ့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရတွေ့ဆုံရန်နိုငျသောအစာရှောင်ခြင်းအဖွင့်နှင့်အပိတ်ပွဲမြန်နှုန်းမျှယိုစိမ့်နှင့်အရှည်လျား switching ဘဝနှင့်အတူမွေးစားဖြစ်ပါတယ်
အသစ်သောမော်လီကျူးဆန်ခါ3ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်ရွေးချယ်ရေး
4. သစ်ကိုအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်း်ပေးရန်, အဆက်မပြတ် device ကိုဒီဇိုင်းပိုကောင်းအောင်, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အရင်းအနှီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှော့ချ
5. Compact ပစ္စည်းကိရိယာများဖွဲ့စည်းပုံမှာကြမ်းပြင်အာကာသလျှော့ချဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်
အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများတည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးအနိမ့်နှစ်ပတ်လည်ပျက်ကွက်မှုနှုန်းနှင့်အတူအလိုအလျောက်လည်ပတ်အောင်မြင်ရန် PLC ထိန်းချုပ်မှုချမှတ်
1. Compressed လေထုသန့်စင်အစိတ်အပိုင်းများ
လေထုတွန်းပေးချုံ့လေကြောင်းပထမဦးဆုံးချုံ့လေထုသန့်စင် module တစ်ခုထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါချုံ့လေကြောင်းပထမဦးဆုံးပိုက် filter ကိုအားဖြင့်ရေနံ, ရေနှင့်မြေမှုန့်ထဲကအများစုဟာဖယ်ရှား, ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖယ်ရှားပြီးရေနှင့်ရေနံနှင့်မြေမှုန့်အေးခဲလေမှုတ်စက်အားဖြင့်, ပြီးတော့နောက်ထပ်နက်ရှိုင်းသောသန့်စင်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် super-ဒဏ်ငွေ filter ကိုအားဖြင့်စင်ကြယ်စေ။ ဖြစ်ပါသည် စနစ်အလုပ်လုပ်ခွအေနအေအဆိုအရချန် rui ကုမ္ပဏီအထူးဖြစ်နိုင်သောသဲလွန်စရေနံထိုးဖောက်မှုကိုတားဆီးနှင့်မော်လီကျူးဆန်ခါများအတွက်လုံလောက်သောကာကွယ်မှုပေးရန်အသုံးပြုသည့် compressed လေထုရေနံ remover, အစုတခုဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ရေတွင်း-ဒီဇိုင်းလေထုသန့်ရှင်းစေသောမော်လီကျူးဆန်ခါ၏အသုံးဝင်သောဘဝသေချာ။ ဒီ component တစ်ခုကကုသသန့်ရှင်းသောလေထုတူရိယာလေကြောင်းအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
2. Air ကိုသိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့
လေထုသိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဟာကြားခံအဖြစ်လေကြောင်းရန် pulsation နှင့်လုပ်ရပ်လျှော့ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်, ထိုစနစ်၏ဖိအားပွောငျးခွငျးလျှော့ချနိုင်ပါတယ်နှင့်အပြည့်အဝရေနံနှင့်ရေအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲ PSA အောက်စီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်၏ဝန်ကိုလျှော့ချရန်အဖြစ်ဒါချုံ့လေကြောင်းချောချောမွေ့မွေ့ခြင်း, ချုံ့လေထုသန့်စင် module ကိုရှောက်သွားနိုင်ပါတယ် ခွဲခြာ device ကို။ အဆိုပါထိစိမ့်မျှော်စင်အလုပ်လုပ် switched အခါတစ်ချိန်တည်းမှာ, ကလည်းထိစိမ့်အတွက်ဖိအားစေသည်ထားတဲ့အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းလျင်မြန်စွာဖိအားထပ်တိုးလိုအပ် compressed လေကြောင်း၏ကြီးမားသောပမာဏ, အတူ PSA အောက်စီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြာ device ကိုထောက်ပံ့ မျှော်စင်အလျင်အမြန်ပြုပြင်ဖိအားမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးသေချာ။
3. အောက်ဆီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြာ device ကို
အထူးမော်လီကျူးဆန်ခါနှင့်အတူ A နှင့် B ထိစိမ့်တာဝါတိုင်ရှိပါတယ်။ စင်ကြယ်ချုံ့လေကြောင်းမျှော်စင်တစ်ဦးက၏ဝင်ပေါက်အဆုံးဝင်နှင့်မော်လီကျူးဆန်ခါတစျဆငျ့ကိုအဆုံးသတ်ဟာထွက်ပေါက်မှစီးဆင်းသည့်အခါ n2 ကစုပ်ယူလျက်, ထုတ်ကုန်အောက်စီဂျင်ဟာထိစိမ့်မျှော်စင်၏ထွက်ပေါက်အဆုံးမှထွက်စီးဆင်းနေသည်။ အချိန်တစ်ဦးကကာလပြီးနောက်တစ်ဦးကမျှော်စင်အတွက်မော်လီကျူးဆန်ခါစုပ်ယူနိုင်ပါသည်နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဤအချိန်တွင်မျှော်စင်တစ်ဦးကအလိုအလျှောက်ထိစိမ့်ရပ်များနှင့် compressed လေကြောင်းနိုက်ထရိုဂျင်စုပ်ယူမှုနှင့်အောက်စီဂျင်မျိုးဆက်များအတွက်မျှော်စင် B သို့စီးဆင်းနှင့်မျှော်စင်တစ်ဦးက၏မော်လီကျူးဆန်ခါ regenerated ဖြစ်ပါတယ်။ မော်လီကျူးဆန်ခါ၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးလျင်မြန်စွာစုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောနိုက်ထရိုဂျင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လေထုဖိအားဖို့ထိစိမ့်ကော်လံကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သည်။ နှစ်ခုတာဝါတိုင်အောင်မြင်သောသီးခြားအောက်စီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် output ကိုအောက်စီဂျင်မှစုပ်ယူနိုင်ပါသည်နှင့် regenerated ခဲ့ကြသည်။ အထက်ပါဖြစ်စဉ်ကို PLC ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ အောက်ဆီဂျင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တန်ဖိုးထွက်ပေါက်အဆုံးမှာသတ်မှတ်သောအခါ, PLC အစီအစဉ်အဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အလိုအလျှောက်အရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့အမှတ်စီးဆင်းပါဘူးဆိုတာသေချာဖို့အရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးအောက်စီဂျင်ရင်ဖွပါလိမ့်မယ်။ ဓာတ်ငွေ့အချည်းနှီးသောအခါ 75dBA ထက်ဆူညံသံလျော့နည်းစေဖို့အတွက်တိတ်ဆိတ်သုံးပါ။
အောက်ဆီဂျင်ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့အောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့ရေးတည်ငြိမ်စေရန်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်ခွဲခြာ system ထဲကနေကွဲကွာအောက်စီဂျင်၏ဖိအားနဲ့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးအသုံးပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အထိစိမ့်မျှော်စင်၏အလုပ်လုပ်ကိုင် switch ကိုအပြီးပြုလုပ်ပြန်ထိစိမ့်မျှော်စင်ရန်၎င်း၏ဓာတ်ငွေ့၏အစိတ်အပိုင်း recharges, တဦးကိုလက်ပေါ်, ကဖိအားမြှင့်တင်ရန်ဖို့ထိစိမ့်မျှော်စင်ကူညီပေးသည်နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကလည်းကစား အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများပြုပြင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးအလွန်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်ထောက်အခန်းကဏ္ဍကစားအိပ်ရာအလွှာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏အခန်းကဏ္ဍ,
အောက်စီဂျင်အထွက်နှုန်း: 5-200nm3 / ဇအောက်စီဂျင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်: 90% -93%
အောက်စီဂျင်ဖိအား: 0.2-0.3 MPA နှင်းအချက်: - 40 ℃ (ဖိအား)
Eaf သံမဏိပွုလုပျ: decarburization, အောက်စီဂျင် - ကူညီလောင်ကျွမ်းခြင်းအပူ, အမြှုပ် slag, သတ္တုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အပြီး - sequence ကိုအပူပေး။ စွန့်ပစ်ရေကုသမှု: အောက်စီဂျင် - activated ရွှံ့နွံ, တင့်ကားအောက်ဆီဂျင်နှင့်အိုဇုနျးပိုးသတ်များကြွယ်ဝပြည့်စုံ aeration ။ Glass ကိုအရည်ပျော်: အောက်စီဂျင် - ကူညီလောင်ကျွမ်းခြင်း - ကူညီဖျက်သိမ်း, ဖြတ်တောက်ခြင်း, ဖန်ထုတ်လုပ်မှု, တိုးချဲ့မီးဖိုထဲဘဝ။ ပျော့ဖတ်အရောင်ချွတ်ခြင်းနှင့်စက္ကူ: ကလိုရင်းအရောင်ချွတ်စျေးပေါအောက်စီဂျင်နှင့်မိလ္လာကုသမှုပေး, အောက်စီဂျင်ကြွယ်ဝတဲ့အရောင်ချွတ်ကူးပြောင်းသည်။ non-ferrous သတ္တုရောစပ်: သံမဏိ, သွပ်, နီကယ်, ခဲနှင့်အခြားလိုအပ်သောအောက်စီဂျင်ကြွယ်ဝသောများ၏ရောစပ်, PSA နည်းလမ်းတဖြည်းဖြည်း cryogenic နည်းလမ်းအစားထိုးနေသည်။ ရေနံဓာတုနှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အောက်စီဂျင်: ရေနံနှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အောက်စီဂျင်တုံ့ပြန်မှုတုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းနှင့်ဓာတုထုတ်ကုန် output ကိုတိုးတက်စေနိုငျသောဓာတ်တိုးတုံ့ပြန်မှုများအတွက်အောက်စီဂျင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံအစားလေကြောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ သတ္တုရိုင်းကုသမှု: ထိုကဲ့သို့သောရွှေကဲ့သို့ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်အသုံးပြုအဖိုးတန်သတ္တုများ၏ထုတ်ယူမှုနှုန်းတိုးတက်စေနိုငျသော။ ငါးမွေးမြူရေး: အောက်စီဂျင်ကြွယ်ဝ aeration ရေအတွက်ဖျက်သိမ်းအောက်စီဂျင်ကိုတိုးမြှင့်အလွန်ငါး၏အထွက်နှုန်းတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှငါးများအတွက်အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်စွာငါးသားကိုမွေးနိုင်ပါ။ ကစော်ဖောက်ခြင်း: အောက်စီဂျင် - ကြွယ်ဝသောအစားလေထု၏, အလွန်သောက်သုံးရေများ၏ထိရောက်မှုတိုးတက်စေနိုင်သည့်အေရိုးဗစ်ကစော်ဖောက်ခြင်း, များအတွက်အောက်စီဂျင်ပေး။
ယခင်: ZBN နိုက်ထရိုဂျင်မီးစက်
ဇီဝလောင်စာဓါတ်ငွေ့ Generator ကိုသတ်မှတ်မည်
ကွန်တိန်နာနိုက်ထရိုဂျင် Generator ကို
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနိုက်ထရိုဂျင် Generator ကို
မီသိန်းဓါတ်ငွေ့ Generator ကို
မော်လီကျူးဆန်ခါ n2 Generator ကို
n2 Generator ကိုစက်ရုံ
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ Generator ကို
နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ Generator ကို
O2 Generator ကို
OEM နိုက်ထရိုဂျင် Generatoroem
Psa ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနိုက်ထရိုဂျင် Generatorpsa
Psa နိုက်ထရိုဂျင် Generatorpsa
Psa O2 စက်ရုံ
အသံတိတ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ Generator ကို
နိုက်ထရိုဂျင် Generator ကို Smelting